Les Orchidées Blanches: manampy amin’ny fanehoan-kevitra ny vaky boky | NewsMada
Les Orchidées Blanches: manampy amin’ny fanehoan-kevitra ny vaky boky
Nohavaozina ary noraisina, omaly, ny fanatsarana ny trano famakiam-boky « Loharano » ho an’ny ankizy manana fahasembanana beazina ao amin’ny akany Les orchidées Blanches Androhibe.
Efa nijoro ny taona 2009 ny trano ahafahan’ny ankizy toy ny mpianatra mitovy aminy mamaky boky, saingy tery ny fotodrafitrasa ka nilana fanitarana. Namatsy vola ny asa ny Humanité – Inclusion miaraka amin’ny consulat de Monaco eto amintsika. 17,5 tapitrisa Ar ny tentimbidin’ny fanavaozana. « Mitovy amin’ny boky ampiasain’ny mpianatra ihany ny hita ao amin’ny trano famakiam-boky ho an’ny ankizy beazina ao amin’ny akany fa ny fomba ampiasaina hampitana ny lohahevitra hita ao anatiny no hafa. Mila averimberina ny fanazavana satria kely kokoa ny fitadidiana ho azy ireo noho ny fahavotsan’ny sainy », hoy ny tomponandraikitra ao amin’ny akany, Rasolonjatovo Volaranto, omaly.
130 ny ankizy raisina an-tanana ao amin’ny akany ary 20 ny mpanabe misahana azy ireo mandritra ny tontolo andro. Mizara efatra ny sokajy, arakaraka ny fahasembanana mahazo. Misy ireo mbola madinika raha 55 taona ny zokiny indrindra. Olana amin’ny fibeazana, indrindra amin’ny fampianarana, ny fahavotsan’ny saina ka mila faharetana, mitaky fikarakarana mivantana koa ny ankizy tsirairay. Mandeha tsikelikely ny fampianarana ary tsy ferana ny fotoana ilaina hampitana izany. Tanjona ny hanampy ny ankizy hamoaka ny zavatra tiany hambara amin’ny vaky boky.
Raha vao teraka ka hatramin’ny faha-3 taona ny fisehoan’ny tsy fahatomombanana amin’ny saina eo amin’ny ankizy. Antony maro ny mety mitarika izany, santionany ny dona nahazo ny reny teo am-pitondrana ny vohoka, ny fahasarotana teo am-piterahana, ny fanintona niseho matetika sy miverimberina amin’ilay zaza…